Ukurhweba kweAlgorithmic kwabaQalayo 🥇Ubuninzi bePROFIT! - Funda nge-2 yoRhwebo ngoMeyi 2022
Funda isiKhokelo soRhwebo nge2 kuRhwebo lweAlgorithmic!
Urhwebo lwealgorithmic - okanye ngokulula 'urhwebo lwealgo', yinkqubo yokuvumela ikhompyuter elungiselelwe kwangaphambili ukuba iphande kwaye ithengise egameni lakho. Umxholo ocacileyo kukuba isiseko sealgorithm sinesakhono sokuqhubekeka idatha yeemarike ngenqanaba elikhawulezileyo kunawe okanye mna.
Ngenxa yoko, iinkqubo zorhwebo zealgorithmic zifunwa kakhulu ngabatyali mali bazo zonke iimilo kunye nobukhulu.
Ngale nto ithethwayo, ialgorithm exhasa isoftware yokurhweba ilungile kanye njengomntu oyakhileyo. Ngamanye amagama, ukuba isoftware iyilelwe kakubi, amathuba okuba iya kuphulukana nemali.
Ngaba unqwenela ukufumanisa ukuba urhwebo lwealgo lusebenza njani? Ukuba kunjalo, qiniseka ukuba uyasifunda Isikhokelo sokuFunda soRhwebo esiyi-2 soRhwebo ngo-Algorithm.
Phawula: Ukuba awuziva ukhululekile ukuvumela inkqubo ukuba ibeke urhwebo egameni lakho, kunokuba kufanelekile ukuqwalasela inkonzo yomqondiso. Apha kulapho i-algorithm ezenzekelayo icebisa urhwebo olusekwe kwiimeko zentengiso-okufuneka emva koko usebenze ngesandla.
Yintoni ukuThengisa ngeAlgorithm?
Kwindlela yayo esisiseko, urhwebo lwealgorithmic sisicwangciso sokurhweba esizenzekelayo esixhomekeke kuphela kwiikhompyuter. Ngokukodwa, itekhnoloji esisiseko iya kuskena amawaka eentengiso ngalo naliphi na ixesha, zihlala zikhangela amathuba okurhweba. Xa isoftware ikholelwa ukuba urhwebo luyenziwa, iya kuthi emva koko ibeke iiodolo ezifanelekileyo ngokuzimeleyo. Kananjalo, ume ukwenza imali ngaphandle kokufuna ukuphakamisa nomnwe omnye.
Ngale nto ithethwayo, icandelo elinzima ukuyila kunye nokwakha inkqubo yorhwebo ye-algorithmic enesakhono sokugqwesa kwintengiso. Emva kwayo yonke loo nto, isoftware ayinakho 'ukucinga' ngentetho nganye, njengoko iyalelwa nje ukuba ilandele iseti yeemeko ezichazwe kwangaphambili. Oku kuyafana nayo nayiphi na inkqubo yesoftware esekwe kubuchwephesha okanye kubuchwephesha bokufunda komatshini.
Umzekelo, masithi isoftware yorhwebo yealgorithmic yenzelwe ukuthenga isibini esikhulu semali xa amaxabiso aso ehla ngaphezulu kwe-5% kwisithuba seeyure ezili-12. Okwesibini kanye ukuba le meko ichazwe kwangaphambili ihlangatyeziwe, i-algo bot bot iya kuqhubeka ukubeka i-odolo yokungena-ecaleni kokulahleka okumileyo kunye nemiyalelo yokuthatha inzuzo. Lo ngumzekelo osisiseko, njengoko amandla okuthengisa isoftware exhaswa yi-algorithm ayinamkhawulo.
Umzekelo, ayisiyi kuba sisoftware kuphela enokukwazi ukuskena amawaka ezixhobo zemali kwi-24/7, kodwa inokuyenza ngaphandle kokudinwa, ukungabi nangqondo, okanye uvakalelo lomntu. Ngapha koko, akukho mda kwinani le- izicwangciso zorhwebo ukuba i-bot algorithmic inokuyalelwa ukuba ilandele. Oku kunokubandakanya izicwangciso ezijolise kurhwebo lwearbitrage, kuthetha ukurhweba ukuguqula, ukurhweba ngamandla, kunye nokuyalela ukuleqwa.
Iinkonzo kunye neengozi zoRhwebo lweAlgorithmic
Iialgorithms zinokuqhubekeka kakhulu ngakumbi kunedatha yomntu
Isoftware esisiseko iskena amawaka eentengiso ngalo naliphi na ixesha
Urhwebo lwe-100% ngokungaziwayo
Iodolo yendawo ngesantya sombane
Isebenza ngama-24/7 ngaphandle kokudinwa okanye ukungabinangqiqo
Akukho mda kwinani lesicwangciso sokurhweba esinokuqeshwa kwitekhnoloji
Uya kuphulukana nemali ukuba ialgorithm yenzelwe kakubi
Abanye ababoneleli bokurhweba ngealgorithm kwindawo ye-Intanethi ngamaqhinga
Usebenza njani urhwebo lwealgorithmic?
Ukuze siqonde ukuba urhwebo lwealgorithmic lusebenza njani, kufuneka sahlule la magama mabini- 'algorithmic' kunye 'nokuthengisa'. Ngokwenza njalo, sinokutyhila isiseko sendlela esilawulwa ngayo isoftware.
Njengoko igama lisitsho, urhwebo lwealgorithmic luxhaswa yialgorithm. Kulabo abangaziyo, iialgorithms zikhona phantse kuzo zonke iindlela zokuhamba kwibala le-Intanethi. Umzekelo, xa ukhangela kwiAmazon kwaye ubone ukuba iwebhusayithi icebisa iimveliso kunye neenkonzo onomdla kuzo, oku kusekwe kwi-algorithm ejonga idatha yezembali.
Olu inokuba luphando lwangaphambili okanye izinto ozithengileyo kule ndawo, okanye ubude bexesha olichithe kwiphepha elithile lemveliso. Nokuba yeyiphi na indlela, ayisiyongxaki yokuba izinto ozibonisayo zihambelane ngokusondeleyo neemfuno zakho kunye neemfuno zakho.
Ke oku kuhambelana njani norhwebo lwealgorithmic? Ewe, endaweni yokuhlalutya ukhetho lwakho lokuthenga, itekhnoloji esisiseko iya kuskena amanani eembali kwiimarike zemali. Kwaye xa sisithi 'scan'. Sithetha uphando olukumgangatho ophezulu kwiintsingiselo zamaxabiso ezembali, kwaye ezi ndlela zihambelana njani nomsebenzi wentengiso yangoku.
Phambili koku ziimetrikhi ezinje ngexabiso lokuthengisa, amanqanaba okuguquguquka, ukuthengiswa kwemali, kunye neemvakalelo zentengiso. Itekhnoloji kamva ixhaswe zizixhobo eziphambili zokufunda kwitshathi- ezinje nge-RSI (Isalathiso Samandla Osihlobo), i-MACD (Ukuhambisa umndilili wokuDibana) kunye neBhendi yeBhendi.
Icandelo lesibini leziko lezinto 'kurhwebo'. Oko kukuthi, nje ukuba isoftware yokurhweba yealgorithmic ibonakalise indawo yokungena enokubakho kwi-asethi elandelelweyo, inkqubo iya kuthi emva koko iqhubeke nokusebenza kuyo. Kwimeko yomrhwebi ongumntu, oku kuya kufuna inkqubo ende kunye nokutsala ingcinga ukumisela ukuba yeyiphi ingeniso kunye nokuphuma kwamaxabiso okuqala.
Umzekelo, umrhwebi kuya kufuneka avavanye elona xabiso liphezulu lokwenza iodolo, kunye nenqaku lesitshixo sokunikezela kwi-stop-loss kunye nee-odolo zenzuzo.
Ngokuchasene noko, isoftware yokurhweba kwialgorithmic inesakhono sokuqinisekisa ungeno olubaluleke kakhulu lokungena kunye nokuphuma kwamaxabiso ngaphakathi kwemillisecond. Kungenxa yokuba yonke into isekwe kwidatha yezembali, kwaye le datha inxibelelana njani nomsebenzi wentengiso yangoku.
Oku kuthetha ntoni kuwe njengomtyalomali kukuba iprothokholi eqinisekisiweyo yorhwebo inikwe umsebenzi wokwenza imali ngendlela ezimeleyo. Kananjalo, umela ithuba lokwenza inzuzo yexesha elide ngaphandle kokufuna ukuba namava endlela ezisebenza ngayo iimarike zezemali.
Yintoni-ukuba ngaba iimeko
Ukuba ubukhe wasebenzisa iMicrosoft Excel ngaphambili kuseto olusekwe emsebenzini, emva koko unokuba sele uyiqonda ngokuqinileyo indlela-ukuba iimeko zisebenza njani. Ukuba uyayenza, ilungile le nto - njengoko oku kuhlala kwindawo engundoqo yendlela amaqonga orhwebo algorithmic asebenza ngayo.
Kulabo abangaziyo, yintoni-ukuba umsebenzi ufuna 'ukwenza' into xa imeko echazwe kwangaphambili ihlangatyeziwe. Kumzekelo wehlabathi lokwenyani, masithi usela uhlobo oluthile lwamanzi asebhotileni yonke imihla. Ngokukhawuleza xa usezantsi kwibhotile yakho yokugqibela, uqhuba uye kwivenkile ekufuphi kuwe kwaye uthenge ezinye iibhokisi ezimbini.
'Yintoni' inxalenye yenxaki kukuphuma uye kuthenga amanzi asebhotileni amaninzi – into oyenzayo xa inxenye ethi 'ukuba' yenxaki iqaliswa. Kulo mzekelo, 'ukuba' inxulumene neyakho esitokisini amanzi asebhotileni ehla ukuya kwiyunithi enye.
Kwimeko yorhwebo lwealgorithmic, 'yintoni' ibhekisa kwisenzo sokubeka urhwebo. Oku kwenziwa ngokuzenzekelayo xa 'ukuba' kubangelwa, enokuba sisalathiso sobuchwephesha esibonisa ithuba elinokubakho lokuthengisa.
Ukuqinisekisa ukuba uyayiqonda indlela esebenza ngayo xa usenza urhwebo nge-algorithm esele ikho, jonga lo mzekelo ungezantsi.
Isoftware yokuthengisa i-algo icwangciselwe ukuhlalutya izitokhwe ezidweliswe kwi-NYSE
Enye yeemeko zayo ezilungiselelwe kwangaphambili kukuvavanya i-RSI, eyenzayo iiyure ezingama-24 ngosuku
Inxalenye 'ye' yealgorithm yi-RSI engama-71
Inxalenye 'yeyiphi' yealgorithm kukubeka iodolo 'yokuthengisa'
Inxalenye yomsebenzi 'wento' efanelekileyo yokungena kunye nemiyalelo yokuphuma
Njengoko ubona koku kungasentla, yintoni-ukuba umsebenzi uvumela umtyali-mali ukuba enze imali kwi-chip-blue stocks xa i-RSI idlula ama-70.
Izibonelelo zoRhwebo lweAlgorithmic
Ngaba awuqinisekanga malunga nezinto ezinokubakho kurhwebo lwealgorithmic? Apha ngezantsi uyakufumana ezinye zezona zizathu ziphambili zokuba kutheni ii-algorithmics zangaphambi kwemeko zihlala zigqithile kubarhwebi babantu.
✔️ Amandla oPhando aMandla
Isibonelelo sokuqala esiphuma engqondweni xa sithembela kwiprothokholi yokurhweba kukukwazi ukwenza inani elingenamda lophando. Njengoko sihlala siqaphela kwisikhokelo sethu sokuFunda 2 soRhwebo, abatyali mali abanamava baya kuhlala behle baye kwinani elithile leeklasi zeeasethi.
Umzekelo, ngokujolisa ngokukodwa kwi igolide kwaye isilivere, Oku kukuvumela ukuba ufumane ubungcali kwindawo enzima yesinyithi. Ngokubaluleka, sicebisa ukuba sijike phantsi njengoko kungaphaya kwemida enokwenzeka yokuphanda udidi ngalunye lweasethi kwindawo yokutyala. Ukuba uzame oku, uya kuba nguJack walo lonke urhwebo kunye nenkosi yezinye.
Ngale nto ithethwayo, isoftware yorhwebo yealgorithmic ayibophelelwanga yimida efanayo notyalo mali lomntu. Ngokuchasene noko, inokukroba amawaka eemarike ezizodwa ngalo naliphi na ixesha elinikiweyo- ngaphandle kwesoyikiso 'sokugcwala kolwazi'
✔️ urhwebo iiyure ezingama-24 ngemini
Ayisiyo kuphela ukuba abathengisi babantu babanjelwe isixa esithile seeyure zophando ngosuku, kodwa kunjalo kwimeko xa ubeka iiodolo. Umzekelo, masithathe usuku oluqhelekileyo lweeyure eziyi-8 kumthengisi wexesha elizeleyo. Umntu unokuchitha iiyure ezininzi eskena iimarike, kunye nemini yonke esenza ezi ziphumo.
Kwelinye icala, kuyinyani ukuba abathengisi abanezakhono bayaziwa ngokwenza ubomi obunesisa kakhulu ngokuthenga nokuthengisa iiasethi. Kwelinye icala, khawufane ucinge ukuba angathengisa malini umrhwebi onamava ukuba bayakwazi ukuphanda kunye nokuthengisa iiyure ezingama-24 ngosuku-iintsuku ezisi-7 ngeveki?
Ngokuqinisekileyo, oku kuphinda kudlule kwimimandla enokubakho kwingqondo yomntu- kodwa hayi inkqubo elungiselelwe kakuhle yokurhweba ngealgorithmic. Kananjalo, ngokusebenzisa i-algo bot bot esebenzela iimfuno zakho zotyalo-mali, unokurhweba ngokufanelekileyo nge-24/7.
✔Kunqande ukurhabaxa kunye neemvakalelo zabantu
Omnye weyona miqobo mikhulu ejongene nabarhwebi babantu yile yeemvakalelo. Nokuba abathengisi abanamava bavumela iimvakalelo ukuba zibangcono amaxesha ngamaxesha, ezinokuthi zibe yintlekele. Masithathe ubhubhane we-coronavirus njengomzekelo ophambili.
Akukho mntu wayenokuqikelela ukuba ukuthanda kwe-S & P 500 bekuya kuchitha kufutshane-kwi-30% kwisithuba seeveki ezi-1-2. Kwelinye icala, abo babambe izikhundla ezikhulu babenokulingwa ukuba bahlukane nendlela yabo yesiqhelo yorhwebo, endaweni yoko benze utyalomali olungenangqondo ukuzama 'ukubuyisa imali'.
Ngokubalulekileyo, i-bot yokurhweba kwi-algorithmic sisiqwenga sesoftware esele icwangcisiwe ukuba ilandele 'iimeko-ukuba' iimeko. Kananjalo, ayikhathali ziimvakalelo okanye ukungacingi.
Ilungele iNewbie Trader
Isibonelelo esongezelelweyo sorhwebo lwealgorithmic kukuba ikuvumela ukuba ubandakanyeke nomzi mveliso wotyalo-mali lwehlabathi ngaphandle kokufumana ulwazi kunye namava. Ngokuqhelekileyo, kuya kufuneka uhambe kwinkqubo ende kunye nobunzima yophando enokuthi ithathe iinyanga ezininzi ukuya kwi-master.
Eyona nto iphambili koku kukufunda ukufunda nokuqonda iitshathi, amaxabiso, kunye nezalathi zobugcisa. Nangona kunjalo, akukho nanye kwezi efunekayo xa uvumela umrhwebi we-algo ukuba asebenze egameni lakho, njengoko iteknoloji isebenza ngendlela ezimeleyo. Oku kuthetha ukuba unokuhlala phantsi kwaye uvumele i-bot ukuba ithenge kwaye ithengise iiasethi ngaphandle kokufuna ukuphakamisa umnwe.
Izicwangciso zokurhweba zeAlgorithmic
Ke ngoku, ukuba unolwazi lokuba isoftware yokurhweba isebenza njani, ngoku kufuneka sixoxe ngamanye amaqhinga ezakucwangciswa umthetho olandelwayo.
Nangona kungekho mda kwinani lezicwangciso ezinokuthi zisetyenziswe, apha ngezantsi uyakufumana imizekelo esetyenziswa ngokuxhaphakileyo.
Ukuthengisa ngokukhawuleza sisicwangciso esithandwayo esisetyenziswa ngabarhwebi abanamava, ke ngokwendalo, iyavakala into yokuba iinkqubo zealgo ziyayisebenzisa nazo. Kulabo abangaziyo, urhwebo olukhawulezayo yinkqubo 'yokutsiba kwindlela' de umkhwa ungasadlali.
Umzekelo, masithi ii-Apple stocks bezikwindlela yokunyuka ukuya kwiiveki ezine ezichanekileyo, kungekho sizathu sicacileyo sokukholelwa ukuba imeko izakuyeka nangaliphi na ixesha kungekudala. Ngale nto engqondweni, iprothokholi yokurhweba ye-algorithmic iya kufuna ukungena kwizikhundla xa ulungiso lweemarike lwenzeka.
Ukulungiswa kweemarike ngexesha lemarike yenkomo zihlala zibangelwa kubatyali mali abatshiye kwiinzuzo zabo - nto leyo ekhokelela ekuhambeni okuncinci kwicala elichaseneyo. Nangona kunjalo, ukuba akukho sizathu sokukholelwa ukuba umfutho ubangelwa kukucothisa, inkqubo yokurhweba yealgorithmic iya kujonga 'ukuthenga idiphu'.
Kwangokunjalo, ikwayimeko enjalo ukuba iiasethi zikwimakethi yebhere, nangona kunjalo, i-bot iya kubeka i-oda yokuthengisa xa i-asethi ilungisa kwicala elingaphezulu.
Ukurhweba ngeArbitrage sisicwangciso esisebenzayo esiqinisekisa ukuba inzuzo nokuba yeyiphi na indlela yentengiso. Umxholo ogqubayo kukuxhamla kwi-asethi enexabiso ngokungakhathali kwiintshintshiselwano ezimbini okanye nangaphezulu.
Ixabiso 'lokuthenga' lesitokhwe seNike kuTshintshiselwano 1 yi- $ 85.00
Ixabiso 'lokuthengisa' lesitokhwe seNike kuTshintshiselwano 2 yi- $ 85.20
Ngokwemigaqo kaLayman, oku kuthetha ukuba ungabeka i-odolo yokuthenga kwistokhwe seNike kwi- $ 85.00, kwaye emva koko uthengise i- $ 85.20. Kananjalo, nokuba yeyiphi indlela yentengiso ehambayo, wenza i-ultra-encinci, kodwa inzuzo eqinisekisiweyo ye-0.24%.
Kukho amanqaku ambalwa abalulekileyo ukuba uqaphele malunga ne-arbitrage yorhwebo.
Okokuqala, xa kuvela amathuba - kunqabile ukuba benze ngaphezulu kwemizuzwana embalwa. Oku kuncinci kakhulu kwixesha elibekiweyo lokuba umrhwebi ongumntu abeke imisebenzi efunekayo.
Ngapha koko, unokuphela uphulukana nemali ukuba unokwazi kuphela ukufumana omnye kubathengisi ababini abekwe kwixabiso elifunekayo. Ngokuchasene noko, isoftware yokurhweba kwialgorithmic inokubeka ukuthengwa okuyimfuneko kunye nokuthengisa iiodolo kwimiba yee-millisecond.
Okwesibini, kuya kubakho kuphela isixa esithile semali ekhoyo - kwiindawo zokungena ezifunekayo, kuzo zombini i-oda yokuthenga kwi-Exchange 1, kunye ne-oda yokuthengisa kwi-Exchange 2. Ayithethi nje kuphela ukuba oku kuthetha ukuba umrhwebi ongumntu kufuneka abale ngqo Kuninzi abanako ukukubeka kurhwebo ngalunye ukwandisa inzuzo yabo, kodwa kwakhona, kuya kufuneka benze oku ngesantya sokurekhoda.
Ngethuba umrhwebi ongumntu ekwazi ukwenza oku, ezinye, okanye zonke, zokuhlawula amatyala ziya kube zityiwe zigqityiwe. Ngale nto ithethwayo, i-bot algorithmic bot iya kuba nakho ukufezekisa oku kungasentla kwii-millisecond.
Mean️ Kuthetha ukuThengiswa koRhwebo
Isicwangciso esongezelelweyo sokurhweba ukuba isoftware yealgorithmic iyakwazi ukuhambisa ngokulula yile yohlaziyo lwentsingiselo. Amaziko kwithiyori yokuba i-asethi iya kuthi ngexesha elithile ibuyele kwixabiso layo lembali.
Ngokukodwa, nangona i-asethi isenokuphambuka kuluhlu lwamaxabiso embali, ngokweenkcukacha-manani - ulwaphulo olukhulu oluphezulu okanye olusezantsi kufuneka lubuyisele umva intsingiselo. Umzekelo, masithi i-algorithmic bot yabelwe ukuthengisa iDow Jones. Ukugcina izinto zilula, siza kuthi ngokwembali, i-Dow ithengisa ngaphakathi kwe-5% ye-200 yeentsuku zayo zokuhamba.
Ukuba u-Doe Jones ungene kwimarike yeebhere yexesha elifutshane- emva koko waphulukana neepesenti ezingama-20 kwisithuba seenyanga ezimbini, umgaqo wokurhweba wealgorithmic unokuthatha isigqibo sokubeka iodolo yokuthenga. Iya kuyenza le nto kuba ngokwezibalo, amathuba kukuba uDow Jones kufuneka abuyele ku +/- 5% yoluhlu lweentsuku ezingama-200 ezihambayo.
Ungawufumana njani uMboneleli wezoRhwebo ngeAlgorithm?
Ukuba usifundile isikhokelo sethu ukuza kuthi ga ngoku, usenokuba ucinga ukuba urhwebo lwealgorithmic yindlela eqinisekileyo yomlilo kuwe yokwenza inzuzo eqinisekileyo. Ngelishwa, ayichanekanga ngqo ngolu hlobo. Isizathu soku kukuba isoftware esisiseko ilungile kuphela njengomntu, okanye iqela labantu, eliyakhayo.
Umzekelo, ukuba i-algo bot icwangciselwe ukuhambisa isicwangciso sokurhweba esisezantsi, yiyo kanye le nto eya kuyenza. Emva kwayo yonke loo nto, isoftware ikwindawo nje yokulandela imiqathango ebekwe kwangaphambili efakwe kwisoftware. Unoko engqondweni, apha ngezantsi uza kufumana iingcebiso malunga nendlela yokufumana umboneleli osemthethweni we-algorithmic.
Phawula: Ukuba awunalo ixesha lokwenza uphando ngokwakho, uya kufumana ababoneleli bethu abathathu abakumgangatho ophezulu wokurhweba nge-algorithmic emazantsi eli phepha.
Isiqalo esisengqiqweni kukwenza umsebenzi wesikolo kwiziqinisekiso zomnikezeli wezorhwebo. I-intanethi igcwele uphononongo kunye nokulinganiswa, ke kufanelekile ukubona ukuba bathini ababhalisi bangaphambili nabangoku malunga nomboneleli.
Xa kuziwa kumaxabiso, le yimetri enzima ukuyivavanya. Umzekelo, ngaba ungathanda ukuchitha i- $ 100 kumthengisi we-algo olahlekelwa yimali, okanye i- $ 2,000 kwiqonga elenza imbuyekezo yenyanga engama-60%? Ngobunzima, ukuba unokuqinisekisa ukuba amabango oboneleli asebenzayo, kuya kufuneka ulungele ukuhlawula ixabiso eliphezulu.
✔ Isixhobo seDemo
Sinokuphikisa ukuba ubukho beziko ledemo yeyona nto ibalulekileyo ekujongeni. Ngokwenza njalo, uya kuba nethuba lokuvavanya isoftware yokurhweba ngaphambi kokuba uyithumele endle. Ngokubalulekileyo, ukuba ufumanisa ukuba i-bot ayenzi ngendlela oyifunayo, ungayinqumla intambo ngokuqinisekisa ukuba ayizukuthengisa ngemali oyisebenzele nzima.
Ngaphezulu kwesibonelelo sedemo, sikhetha iindawo zokurhweba ze-algo ezibonelela ngesilingo sasimahla sohlobo oluthile. Umzekelo, ukuba iqonga libonelela ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali seentsuku ezingama-30, oku kuyakuvumela ukuba ufumane imali ekubhaliseni kwakho.
✔ Ukubhaliswa kwenyanga
Ngaphandle kwamathandabuzo, uyacetyiswa ukuba ukhethe umboneleli we-algorithmic osebenza kwimodeli yenyanga yokubhaliselwa. Isizathu soku kukuba umboneleli uya kukhuthazwa ukuba enze iitweaks eziyimfuneko kunye nophuculo rhoqo.
Ukuba ayenzi njalo, umboneleli uyazi ukuba uya kuphulukana nokuhlawula abathengi. Ngokubalulekileyo, ukuba usebenzisa umboneleli ohlawulisa umrhumo omkhulu, uya kubambeka kwilimbo ukuba kuvela i-algo bot ingezantsi kumhlathana.
Ukurhweba ngaphakathi kwi-Algo okanye ukuNgqinelana kweBroker
Kukwabalulekile ukuchitha ixesha elithile ucinga malunga nendlela oza kuthi ubekwe ngayo umsebenzi wakho. Emva kwayo yonke loo nto, ekuphela kwendlela yokuthengisa iiasethi kwi-Intanethi kukusebenzisa umthengisi.
Ngale ndlela, unokukhetha ezimbini-umboneleli obeka urhwebo ngaphakathi endlwini, okanye ekuvumela ukuba uqhagamshele i-bot kwiiakhawunti zakho zorhwebo.
Ukurhweba ngaphakathi kwi-Algo
Amanye amaqonga orhwebo wealgorithmic abonelela ngayo yonke-impahla. Ngale nto, sithetha ukuba umboneleli uya kuqinisekisa ukuba urhwebo oluzenzekelayo lubekwa neeakhawunti zalo zabarhwebi. Ngokwenza njalo, uya kuba nelungelo kwisabelo sakho senzuzo-khomishini encinci.
Umzekelo, masithi utyale imali eyi- $ 5,000 kunye nomnikezeli ngexabiso lekhomishini ye-10%. Ukuba ngenyanga kaMeyi isoftware ye-algo yenza ukubuya kwe-45%, oku kufikelela kwinzuzo eyi- $ 2,250. Nje ukuba uthabathe ikhomishini ye- $ 225, oku kukushiya unenzuzo ecocekileyo ye- $ 2,025.
Abanye abathengisi bakhetha ukuba nolawulo ngakumbi kutyalo-mali lwabo lwesoftware. Kananjalo, bakhetha ukusebenzisa umboneleli obonelela ngokuhambelana nomthengisi. Ngokwemigaqo kaLayman, oku kuthetha ukuba i-algorithmic bot inokudityaniswa neeakhawunti zakho zabarhwebi.
Kwiimeko ezininzi, isoftware iya kuhambelana nayo nayiphi na MT4 okanye i-MT5, oko kuthetha ukuba ungayisebenzisa kumakhulu wabarhwebi abakwi-Intanethi. Ngapha koko, uya kuba nolawulo olupheleleyo kuyo yonke inkqubo yotyalo-mali-ke ufumana umbono ogcweleyo wentaka wento eyenzayo i-bot.
Ababoneleli ngeNtengiso yeAlgorithmic ye2022
Ukuba uyasithanda isandi sokuba nentengiso ye-algo bot egameni lakho 24/7, ngezantsi uyakufumana ezona zikhetho zethu zintathu zibonelela ngo-2022. Njengesiqhelo, qiniseka ukwenza olwakho uphando ngaphambi kokuba wohlukane nemali yakho.
1. Inzuzo yokufumana inzuzo Yenza i $ 1,500 ukuya kwi-4,200 yeeDola mihla le ngeSoftware yeNtengiso yeHlabathi
Itekhnoloji yethu yorhwebo ekhethekileyo ibeka iliso kwi-crypto yelizwe kunye neenzuzo 24/7
Idatha yethu enkulu yokuqokelela iifayile eziphambili kwiipateni kwiimarike
I-algorithm yethu 'yorhwebo yeNzuzo' enelungelo elilodwa lomenzi wethu iqinisekisa ukuba abasebenzisi bethu benza ngaphezulu kwe- $ 2000 ngosuku
Funda amaxabiso ama-2 oRhwebo
Iipesenti ezingama-88 zeBanga lokuPhumelela
$ / £ 250 Min idiphozithi
Yamkela iDebit kunye neKhadi letyala
Ndwendwela iNzuzo yeNzuzo
2. Inkulumbuso yeNzuzo - Zuza ukuya kuthi ga kwi-3,000 yeeDola ngosuku ngokuqala namhlanje
NgeSoftware yethu yokuThengisa ngokuZenzekelayo
I-Prime Advantage ibango lokuba i-bot yayo yorhwebo i-algo inokukrola inzuzo encinci ye-3 yezigidi zemizuzwana ngokukhawuleza kunabarhwebi bamaziko. Iqela libonelela ngenkxaso yobuchwephesha epheleleyo ukuqinisekisa ukuba unethuba elingaphezulu kweemarike ngalo lonke ixesha.
Inkxaso yabaxhasi be-5 Star
I-100% yokuSebenza ngaphakathi endlwini
Ukurhweba ngeDijithali yemali kuphela-akukho zii-CFD okanye i-forex
Ndwendwela iNkulumbuso yeNcedo
3. Umrhwebi weCFD-Zizimele ngokwezeMali ngokuThengisa kwi-Intanethi
Umrhwebi weCFD ufanelekile kwabo bazokuzama inkqubo yorhwebo yealgorithmic. Ngotyalo-mali lokungena kwinqanaba le- € 250 nje kuphela, iqonga lisebenzisa isicwangciso sokurhweba ngaphakathi. Oku kuthetha ukuba lonke urhwebo luya kwenziwa egameni lakho. Ngokubalulekileyo, unokurhoxisa utyalomali lwakho nangaliphi na ixesha.
Ukufikelela ngokuthe ngqo simahla kwi- # 1 yomthengisi weCFD wase-UK
Ifowuni yoku-1 yasimahla ye-1on1 yokuqeqesha ngaphakathi kweeyure zokuqala ezingama-48 zokubhalisa
Umcebisi wakho oza kukunceda iveki neveki
Ndwendwela uMthengisi weCFD
4. Sijoyine kwaye uqalise ukuba sisityebi nge-Crypto Trader!
Umhwebi we-Crypto liqela eligcinelwe kuphela abantu abatsiba kwimbuyekezo yempambano ethi i-Bitcoin ibonelele kwaye ngokuzolileyo baqokelele imali eninzi ngokwenza njalo. Amalungu ethu ayonwabela ukuphumla kwihlabathi liphela inyanga nenyanga ngelixa besenza imali kwiLaptop yabo ngemizuzu nje embalwa "yomsebenzi" yonke imihla
Ubuncinci bedipozithi eyi- $ 100
Ngaphezulu kwezixhobo zokurhweba ezingama-2,000
Ifowuni yeselfowuni iyafumaneka
Imali yakho eyinkunzi isemngciphekweni.
Akunakuphikwa ukuba isoftware yealgorithmic inokugqwesa umrhwebi wabantu kwiindawo ezininzi. Nokuba kutshekishwa amawaka eemarike ngesiseko se-24/7, ukuhambisa amakhulu ezalathi zobuchwephesha nangaliphi na ixesha, okanye ukubeka urhwebo oluzenzekelayo kwimiba yee-milliseconds - akukho mkhawulo kwizinto ezinokwenziwa yi-algo bots.
Emva kwayo yonke loo nto, itekhnoloji esisiseko isenza nje ukuba-ukuba imisebenzi-ke unakho ukwenza inzuzo engaguqukiyo ngaphandle kokuphakamisa umnwe. Nangona kunjalo, usadinga ukuchitha ixesha elininzi ukuphanda iziqinisekiso zomnikezeli wakho weentengiso okhethiweyo, ubuncinci kuba ishishini ligcwele ubuqhetseba.
Ukukunceda apha endleleni, sixoxe ngezindululo zethu zorhwebo esele zenziwe uhlolo- zonke zinerekhodi ekudala ikho kwisithuba.
Ngaba ndifanele ndisebenzise urhwebo lwasimahla kwisoftware yokurhweba?
Mhlawumbi akunjalo. Oko kukuthi, ngaba ungachitha iminyaka usakha i-bot ephezulu ye-algorithmic bot enokugqwesa kwiimarike zezemali, emva koko uyinike mahala?
Ndazi njani ukuba umboneleli we-algorithmic urhwebo lusemthethweni?
Akunakuphikwa ukuba indawo yokurhweba yealgorithmic igcwele ngabanikezeli benkohliso abenza amabango anesibindi. Kananjalo, kuya kufuneka wenze iimfumba zophando ngaphambi kokuba ubhalise.
Ixabisa malini isoftware yokurhweba?
Oku kunokwahluka ngokubanzi kuxhomekeke kwiziphumo zorhwebo eziqinisekisiweyo. Umzekelo, uza kuhlawula ngaphezulu kakhulu kwi-bot ene-avareji yembuyekezo yenyanga ye-70%, kunokuba uza kwenza nge-2%.
Ndizifumana njani iirobhothi zam zorhwebo ukuze zilandele iindlela zam zobuqu?
Unokwenza oku kuphela ukuba umniki-nkonzo we-algorithmic ukuvumela ukuba ufumane ukufikelela kwikhowudi yomthombo wesoftware. Akunakulindeleka ukuba oku kuyakuba njalo, kuba oku kuya kuvumela ababhalisile ukuba babelane ngekhowudi nabantu besithathu.
Ngaba ndingavavanya isoftware yokurhweba ngaphandle kokubeka emngciphekweni imali yam?
Kwezinye iimeko, ewe. Ngapha koko, sikhetha ababoneleli ababonelela ngendawo yedemo yangaphakathi, kuba oku kukuvumela ukuba uvavanye ukuqhuba i-bot ngaphambi kokubeka emngciphekweni imali yakho.
Zeziphi iiklasi zeeasethi ezijolise kwisoftware yokurhweba?
Phantse lonke udidi lweeasethi onokuluthelekelela! Ngokubalulekileyo, akukho mda kwinani leemarike zorhwebo ze-algorithm ezinokuhlalutya.
Ndihlawula njani isoftware yokurhweba kwialgorithmic?
Uninzi lwabanikezeli bayakuvumela ukuba uhlawule nge-debit / ikhadi lekhredithi okanye i-e-wallet.